बलात्कार गर्न खोज्नेमाथि खुकुरी प्रहार गरी बालिकाले गरिन आत्मरक्षा - JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
बलात्कार गर्न खोज्नेमाथि खुकुरी प्रहार गरी बालिकाले गरिन आत्मरक्षा
धनकुटा । बलात्कार गर्न खोज्ने युवकमाथि खुकुरी प्रहार गरी बालिकाले आत्मरक्षा गरेकी छिन्। झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाकी १३ वर्षीया बालिकाले आफूमाथि बलात्कार गर्न खोज्ने धनकुटाको पात्लेखोलाका सन्तोष गुरुङमाथि खुकुरी प्रहार गरी आत्मरक्षा गरेकी हुन्। घटनापछि स्थानीय युवाले गुरुङलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका छन्।
अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न ठाउँबाट ७ जना पक्राउ
काठमाडौं विमानस्थलमा ५ करोडको कोकिन !
खोलामा दुईनम्बरी काम !
कस्ले चाेर्याे बागेश्वरीका त्यत्रा गरगहना ?